Supply Mano: 1000 Piece / Pieces pamwedzi
To regularly increase the management program by virtue from the rule of "sincerely, good religion and high quality are the base of enterprise development", we greatly absorb the essence of linked products internationally, and constantly produce new goods to satisfy the calls for of shoppers for Tricyclye Food ngoro , Hot Dog Vending yekutengera , Mobile Vending yekutengera , Your inquiry might be extremely welcomed plus a win-win prosperous development are what we've been expecting.
Kunze Size (mm)
Vakabvumira kunonyanyisa mutoro
8 mamita 2
Stainless simbi + Counertop
Multifunctional Gas chitofu
Single Burner (gasi)
Kunyura (yemagetsi fauce + kaviri mugomo)
High yepamusoro motokari ekuteerera (mutauri kaviri)
Musasa, Lightbox, akatungamirira Strip
1, zvokudya okutengesa motokari.
Anogona kuiswa munzvimbo wokukwezva vashanyi, chivaraidzo nzvimbo, mune chipatapata migwagwa, misika usiku, zvitoro dzezvitoro, zvikoro, mafekitari, dzinofamba mumigwagwa, dzinogarwa nzvimbo.
2. Commercial kuratidza nemotokari.
Kushandiswawo kuratidza vashambadzirane, makabhati, aiva pakukurukura, erotari, zvivako uye zvimwe vezvokutengeserana kuratidzira.
3, michero uye miriwo okutengesa motokari.
9m2 muviri guru uye kuchengetwa nzvimbo, zvose zvamarudzi ose michero nemiriwo zvachero akatakudza; rakavhurika Kumbofungatira inoratidzirwa kumira, "0" kure kutengeswa. 5 akaturikidzana ose Mobile pasherefu echiShinto pamwe njanji anogona paita rimwe chete kungosunda.
4, Photo Studio motokari.
Kushandiswawo kumuchato photos Studio, yakakodzera mabasa, bvudzi mbambo, dzidzo nezvimwe vezvokutengeserana zvirongwa.
Kushandiswawo kufamba, musasa, yevedza, hotera nezvimwe zvakawanda zvirongwa.
Chinhu chiduku, mbiri-vhiri kana mana vhiri tarakita isina simba uye anogona kuva tsika-yakaitwa uye multi-chinangwa.
The mavhiri motokari kurarama kana kufamba, kunyanya mazororo, kuti rine mibhedha uye zvokushandisa kubika uye inogona kudhonzwa nemotokari.
Vatengi ose hanya pashure-ikatengesa basa, saka tiri:
1. The Machine anowana rimwe gore garandi nguva.
2. Factory zvakananga zvitengeswa: zvakavimbika unhu uye kutsanya pakusununguka.
3. Munguva, Kana muchina mudambudziko isu achakutungamirira kubata nezvinetso.
4. Customized mabasa
Tinogona gadzirisa mashoko Mobile yokudyira motokari maererano dzenyu zvinodiwa, zvakadai zvinhu, saizi, ruvara, pendi, Logo, etc.
Kana mari kuburikidza Ali Trade Assurance, vachishandisa kadhi kana T / T, iwe uchava mari kuna Alibaba kutanga, zvino isu kugadzira uye kurwira, Ali kuzvitenga nesu chete kana iwe musimbise dzako yemagetsi chibvumirano kuti iwe magamuchira nhumbi, kana Ali ndichatuma mari kwamuri.
Kuti chipikirwa yedu. Uye isu tiri kutsvaka Distributor zvakanaka munyika yako, saka matambudziko pamusoro ivo zvichapedzwa yakakodzera zvikuru .And isu tariro pashure kuedzwe muchina pano aigona kutora zvakanaka bhizimisi pamwe.
Food Trucks: Kubva kwechokwadi kuna yechigarire
Ko Social Media Achikosha To Zvokudya Truck Success?
Customizable Ice inopedzisira yaparara yekutengera
Electric Ice Cream yekutengera
Food Ice Cream yekutengera
Fried Ice Cream yekutengera Trailer
Fried Ice Cream Vending ngoro
Fry Ice Cream tudyo Trailer
Hand Push Ice inopedzisira yaparara yekutengera
High Quality Mobile Ice Cream yekutengera
Ice Cream ngoro For Sale
Ice Cream Food yekutengera
Ice Cream Hot Dog yekutengera
Ice Cream Kiosk yekutengera
Ice Cream Mobile yekutengera
Ice Cream Push yekutengera
Ice Cream Vending yekutengera
Mobile fried Ice Cream yekutengera
New Style Ice Cream yekutengera
Dambwadambwa Ice Cream ngoro
Street Ice Cream yekutengera
Street Mobile Ice Cream yekutengera
Vending Ice Cream yekutengera
U rudo motokari